Maxamuudow 4.5 Million Oo Dollar May Gelin Madaarka Hargeysa Ee Meeday Lacagtii? | Salaan Media
Maxamuudow 4.5 Million Oo Dollar May Gelin Madaarka Hargeysa Ee Meeday Lacagtii?
Wasaarada duulista iyo hawada Somaliland way ku fashilantay dib u habayntii labada Madaar ee Hargeysa iyo Berbera.
Madaarka Hargeysa waxaynu la soconaa in isaga oo shaqaynayaa la xidhay oo la yidhi waa la adkaynaya waana la dheeraynaya si ay dayuurado waaweyni usoo fadhiistaan.
Markii loo diyaar garoobey in Qandaraaska la bixiyo ayaa sharikadihii ku tartami lahaa candhuuftoodi dib u liqeen markay ogaadeen in tartanba aanu jirin ee Madaxtooyada laga soo bixiyey Qaqndaraaska oo lasiiyey wiil odaygu adeer u yahay . Berigii hore marka mashruuc soo baxo, nin qoyska ka mid ahna uu shaqo la’yahay, waxa la odhan jirey waar hebel waa dareewal e meesha shaqo ka siiya. Laakiin may dhici jirin mashruuc dawladi fulin kari weydey in la siiyo qof keligii ordaya. Dawlada indha adkaanta intaa leeg dadka la hor imanaysaa, waxa kasii darana way ku kici kartaa.
Madaarka waxa ka soo degi jirey dayuurado waaweyn oo ay ka mid yihiin dayuuradii Ruushka ee Illyushin 18. Bal fadlan isu eega waxa u dhexeeya labada dayuuradood ee midna hada lagu faanayo in ay kasoo degto iyo kuwii markii hore ka soo degi jirey. Miisaanka hore waxa weeye miisaanka u culus ee mid waliba ku kici karto. Miisaanka danbena waxa weeye miisaanka u culus ee mid waliba kusoo degi kagi karto.
Illyushion 18 DC 9 Boeing 737-400
Miisaanka U culus 64,000 Kg 54,000 Kg 68,000 Kg
Ee ay ku kici karto
Miisaanka u culus 53,000 Kg 50,000 Kg 56,000 Kg
ee kusoo degi karto.
Tirada rakaabka ee 120 100 200
ay qaadi karaan
Waxaad arkaysaa n in waxa u dhexeeya ee la taaban karaa ay tahay tirada rakaabka.
Waa maqlayseen maalmihii dhaweyd oo dhan in lalahaa dayuuradaha Daallo iyo Jubba waxay qaadeen 120-130 rakaab ah. Waa intii awelba ay qaadi jireen dayuuradihii iman jirey Hargeysa. Haddii dhabaha dayuuraduhu adag yahay ama ku filan yahay maxaa loo qaadi waayey 200 oo rakaab ah. Xujaajtii way buuxdaaye, Maxaa kolba loo qaadayaa 120 qof?
Nasiib darro, Wax iska bedeley Madaarka Egal international ma jirto. Tiradii rakaabkii kasoo degi jirey ama ka dhoofi jirey ayaa hadana kasoo dega ama ka dhoofa.
Runtii taasi may ahayn ujeedadii laynoo siiyey mucaawimada ee waxa laynoo siiyey in aynu dhabaha dayuuradaha ku adkayno kuna kordhino dhererkiisa. Dayuurada hada imanaysaa maxay taraysaa hadaanay iyadoo buuxda soona fadhiisan Karin kana kici Karin dhabaha ee ay ku qasban tahay in ay mar walba aad u dhinto rakaabka ama alaabada ay keenayso ama qaadayso
Waxaan aad uga xumahay in dawladii difaaci lahayd Madaarka iyo dadka kasoo degaya ay been iyo indho aadayg lasoo taagan tahay oo ay difaacayso budhcadii lunsatay caawimadii lagu soo qaaday magaca ummada.
Waxaa arkayseen maalmahanba Culays la saarayo shirkadaha dayuuradaha oo marna la baryayo marna loo hanjabayo si ay u hadlaan oo yidhaahdaan Madaarkii waa la hagaajiyey.
Waxaanu leenahay dayuuradahaas kalsoonida shicibka ha luminan oo dacaayado dadka lagu majaro habaabinayo ha ka qayb gelina. Denbigaa waxa kow ka ah Wasiirka wasaarada duulista Maxamuud Xashi.
Qandaraaskan sidii loo musuqmaasuqayna waxa kula jira guddoomiyaha guddida qandaraasyada, dareewalka lasiiyey qandaraaska ee isku qaaday waxaanu garanayn iyo cidii Madaxtooyada ka soo socotey ee soo saartay amarka lagu bixieye qandaraaska.
Waxaan nasiib darro labaad ah in Wasiiro dhawr ah oo magac ku leh umada reer Somaliland dhexdeeda loo adegsado sidii loo denbebesi lahaa musuqmaasuqa intaa leeg.
Waxaan kusoo gabagabynayaa, Maxamuudow fadlan ummada reer Somaliland u sheeg lacagtii xagay jirto, ilayn way cadahay in aanay Madaarka Hargeysa 4.5 million Dollar geline?
Eng. Maxamuud Xirsi Qatala